Global Voices teny Malagasy » Arahabain’ny Rising Voices Ny Tetikasam-Piarovana Teny Indizeny Dimy Vaovao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Febroary 2016 8:17 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Faly ny Rising Voices  manambara fa natolotra ho an'ireo tetikasam-piarovana teny teratany dimy ao Arzantina, El Salvador, Meksika, ary Nikaragoà ny vatsy ara-bola tamin'ity taona ity..
Noho ny anjara asanay manohana ihany koa ireo fisantarana andraikitra mampiasa fampitam-baovao nomerika sy aterineto mba hamelomana indray sy hampiroboroboana ny tenin-drazana amin'ny aterineto, dia nanao antso handray tolo-kevitra  izahay tamin'ny faramparan'ny taona 2015, manasa ireo vondrom-piarahamonina mba handefa ny hevitr'izy ireo ao anaty tetikasa ny fahazotoanizy ireo ara-nomerika. Vokatr'izany, tolo-kevitra 63 avy amin'ny firenena 12 manerana an'i Amerika Latina no voaranay, ahitana tolo-kevitra miavaka manokana hampianarana amin'ny vondrom-piarahamonina ifotony ny fomba fahazoana tombony amin'ny fampiasana fitaovana nomerika ho fampiroboroboana ny tenin-drazan'izy ireo, sy hiatrehana ny fanamby manokana mifandraika amin'izany ny tsirairay amin'ireo tetikasa ireo. Nasaina ihany koa ireo mpandray anjara mba hizara ny hevitr'izy ireo amin'ny ho fomba fiasan'izy ireo hahazoana fiantraikany bebe kokoa amin'ny fampiasana paikadim-panandrata-teny ao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto.
Nasaina ireo vondrom-piarahamonina mba hizara ny tolo-kevitr'izy ireo  amin'ny alalan'ny tranonkala Activismo Lenguas , izay ahafahan'ireo mpandray anjara sy mpikambana amin'ny tambajotra maneho hevitra, handefa tamberina, na hizara teny fankaherezana. Iray amin'ireo tanjon'ny tranonkala ny hanamorana ny fifandraisana eo amin'ny vondrom-piarahamonina samihafa ao amin'ny toerana ara-jeografia iray, mitovy fomba fiteny na mampiasa sehatra nomerika mitovy.
Hanofana ny vondrom-piarahamonina Mapuche ao Buenos Aires amin'ny fomba hananganana tahirim-peo mifantoka amin'ny tononkalo sy ny mozika ireo vondron'olona sy fikambanana isan-karazany toy ny Kom Kim Mapudunguaiñ Warria Mew , CEPPAS , ary Mapuexpress  , ho lalana iray anasongadinana ny tokony hamelomana indray ny teny Mapudungun  ao amin'ny vondrom-piarahamonina mpifindra-monina an-tanandehibe.
Hampianatra ny tanora Lenca  sy Kakawira ny tetikasa ifarimbonana ao amin'ny Vaomiera Nasionaly Fandrindrana ny Teratany ao Salvadaoro  (CCNIS ny fanombohan'anarana amin'ny teny espaniola) sy ireo teratany mpitarika any ifotony amin'ny fomba hamolavolana fitaovam-pampianarana media marolafy nomerika amin'ny teny Potón sy Pisbi hanampy amin'ny fanairana momba ny toerana misy ny teny teratany amin'izao fotoana izao.
Hianatra ny fomba famoronana lahatsary, bilaogy sy hiasa hiaraka hanangana rakibolana antserasera, hitrandraka ireo fomba hahatonga ny mpianatry ny oniversite ho hery mitarika ny hafa handrisika hianatra na hitahiry ny tenin-drazan'izy ireo ny mpianatra teratany Miskito  sy Mayangna manatrika fampianarana momba ny fitarihana ao amin'ny Oniversite Mizakatena ao Amorontsiraka Karaiba Nikaragoanina  (URACCAN, amin'ny fanafohezana anarana amin'ny teny Espaniola) ao Puerto Cabezas .
Vehivavy efatra ao amin'ny fanjakan'i Tabasco  no tsy sasatra mampianatra ny hafa ny fiteny Yokot'an (Chontal ) amin'ny alalan'ny fampianarana an-dakilasy. Ankehitriny, mikasa hitondra ity asa fanentanana ity eo amin'ny tontolo nomerika amin'ny alalan'ny atrikasa izy ireo hananganana fampielezampeo antserasera mandefa fandaharana amin'ny fiteny Yokot'an, ary mamokatra fandraisam-peo miaraka amin'ny hafatra ara-pahasalamana sy fanabeazana ho an'ny fiarahamonina ihany koa.
Mpianatra amin'ny sokajin-taona rehetra ao San Luis Potosí  no asaina handray anjara amin'ity tetikasa ity hiasa miaraka amin'ny teny Tenek (Huastec ) ao amin'ny aterineto. Amin'ny fanatonana ny mpianatra amin'ny alalan'ny teknolojia, dia azo heverina kokoa ny hahaliana azy ireo amin'ny fitazonana ny tenin'izy ireo. Haseho amin'ireo mpianatra ny fomba fananganana horonanmpeo fohy sy ny manao fandravahana hitantara ny tantara an-dahatsary.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/13/79122/
 nanao antso handray tolo-kevitra: https://rising.globalvoices.org/lenguas/microfondos
 hizara ny tolo-kevitr'izy ireo: https://rising.globalvoices.org/lenguas/tag/propuestas-microfondos-2015/
 Vaomiera Nasionaly Fandrindrana ny Teratany ao Salvadaoro: http://www.ccniselsalvador.org/
 Oniversite Mizakatena ao Amorontsiraka Karaiba Nikaragoanina: http://www.uraccan.edu.ni/